General Governor General Michaëlle Jean: Biography
Nke 27 Gọvanọ General nke Canada
Onye na-ede akụkọ na onye mgbasa ozi amara na Quebec , Michaëlle Jean si na Haiti kwabata na ezinụlọ ya mgbe ọ dị obere. Ndị na-asụ asụsụ ise-French, English, Italian, Spanish and Haitian Creole-Jean ghọrọ onye isi ojii isi ojii nke Canada n'afọ 2005. Onye na-akwado ndị na-elekọta mmadụ maka ụmụ nwanyị na ụmụaka nọ n'ihe ize ndụ, Jean mere atụmatụ iji ụlọ ọrụ gọọmenti n'ozuzu nyere ndị enyemaka aka eto eto. Jean lụrụ di na nwunye Jean-Daniel Lafond ma nwee nwa nwanyị.
Gọvanọ General nke Canada
Minista Minista Canada Paul Martin choro Jean ka o buru onye isi gomenti nke Canada, na August 2005, ekwuputara na Queen Elizabeth II kwadoro oke. Mgbe a họpụtara Jean, ụfọdụ gbara ajụjụ banyere iguzosi ike n'ihe ya, n'ihi akụkọ banyere ya na nkwado di ya maka nnwere onwe nke Quebec, yana ya abụọ French na nwa amaala Canada. Ọ na-akatọ ọtụtụ akụkọ banyere mmetụta uche ya dị iche iche, ma katọọ ya ịbụ onye amaala French. A ṅụrụ Jean n'ọkwá Septemba 27, 2005 ma rụọ ọrụ dịka onye isi gọvanọ 27 nke Canada ruo n'October 1, 2010.
A mụrụ Jean na Port-au-Prince, Haiti n'afọ 1957. Mgbe ọ dị afọ iri na otu na 1968, Jean na ezinụlọ ya gbapụrụ n'aka ọchịchị Dov Duvalier wee biri na Montreal.
Jean nwere BA n'asụsụ Ịtali, asụsụ Sespanik na akwụkwọ si n'aka Mahadum Montreal. O nwetara ogo mmụta nna ya ukwu na akwụkwọ nhata site n'otu ụlọ ọrụ ahụ.
Jean mụkwara asụsụ na akwụkwọ na Mahadum Perouse, Mahadum Florence na Mahadum Katọlik nke Milan.
Jean rụrụ ọrụ dị ka onye nkụzi mahadum mgbe ọ na-agwụcha akara ogo ya. Ọ na-arụ ọrụ dị ka onye na-akwado ọha mmadụ, yana onye nta akụkọ na onye mgbasa ozi.
Michaëlle Jean dịka Onye Ọrụ Ọchịchị
Malite n'afọ 1979 rue 1987, Jean na Quebec rụkọrọ ọrụ maka ndị inyom a na-eti ihe ma nye aka ịmepụta netwọk ụlọ nchebe na Quebec. Ọ na-ahazi ọmụmụ banyere ụmụ nwanyị dịka ndị a na-emegbu na mmekọrịta mkparị, nke e bipụtara na 1987, ya na ndị òtù enyemaka maka ndị inyom na ezinụlọ ndị si mba ọzọ na-arụ ọrụ. Jean rụkwara ọrụ na Employment and Immigration Canada na Council des Communautés culturelles du Québec.
Ihe gbasara Michaëlle Jean na Arts na Communications
Jean sonyeere Radio-Canada n'afọ 1988. Ọ rụrụ ọrụ dị ka onye nta akụkọ wee gaa n'ihu na-ahụ maka ọrụ gbasara ọha na eze "Actuel," "Montréal na abalị," "Virages" na "Le Point." N'afọ 1995, ọ kpọchiri usoro ihe omume nke Radio Network na Radio-Canada (RDI) dị ka "Le Monde ce evening," "L'Édition québécoise," "ndị Horizons francophones," "Les Grands reportages," "Le Journal RDI, "na" RDI na-ege ntị. "
Malite na 1999, Jean kwadoro CBC Newsworld nke "Anya Na-ahụ Anya" na "Egwu Kwụsị." N'afọ 2001, Jean ghọrọ arịlịka maka mbipụta nke izu ụka "Le Téléjournal," ihe ngosi mgbasa ozi akụkọ Radio-Canada. Na 2003, o weghaara dịka arịlịka nke "Le Midi," mbipụta nke "Le Téléjournal" kwa ụbọchị. N'afọ 2004, ọ malitere igosi onwe ya "Michaëlle," bụ nke gbara ajụjụ ọnụ na ndị ọkachamara na ndị na-anụ ọkụ n'obi.
Na-agbakwunye, Jean esonyela ọtụtụ ihe nkiri vidio nke di ya bụ Jean-Daniel Lafond dere, gụnyere "La ụzọ nègre ou Aimé Césaire ụzọ doing," "Tropique Nord," "Haiti na kpukpru ọhụụ," na "Oge nke Cuba. "
Mgbe Gọọmenti General General
Jean nọgidere na-arụsi ọrụ ike n'ihu ọrụ ya dịka onye nnọchiteanya gọọmentị nke eze Canada. O jere ozi dịka onye nnọchiteanya pụrụ iche nke United Nations na Haiti iji rụọ ọrụ na agụmakwụkwọ na ịda ogbenye na mba ahụ, ọ bụkwa onye nchịkwa nke Mahadum Ottawa site na 2012 ruo 2015. Malite na Jan. 5, 2015, Jean malitere iwu afọ anọ dị ka odeakwụkwọ ukwu nke International Organization of La Francophonie, nke na-anọchite anya mba na mpaghara ebe asụsụ French na ọdịbendị nwere ọnụnọ dị ukwuu.
T4A (P) Ụtụ Ụtụ Isi Maka Ụtụ Isi nke Canada
Ọnwụ ndị ọchịchị na Canada na-atụle ọtụtụ ike na nchịkwa
PM Jean Chretien: Onye na-agba ọsọ n'okporo ámá na-akụzi ihe
Ụlọ Ọkụ nke Canada na 1916
4 Ụzọ iji chekwaa ụtụ isi nke Canada
Oge Mbụ Ụlọ E Si Nweta Ụtụ (HBTC)
Akwukwo ihe omuma nke Irene Parlby
Sayensị Na-akọwa Ihe Mere I Ji Agbaju Mmiri
Ole Kirk Christiansen na Akụkọ Lego
Isi nke Alchemy dị n'ime Taoism
20 Eziokwu Banyere James Scott
Kedu ihe bụ ígwè dị ọkụ?
Agha Obodo Amerịka: Isi General Joshua L. Chamberlain
Ụbọchị mama m na Muttertag na Germany
Egwuregwu Egwuregwu Olympic
Ole Ndị Bụ Nchebe Uhie China?
Otua esi ekwu maka ugbua
Ụlọ nke nwere onwe ya
Okwu mmalite nke Cephalopods
Egwuregwu Ndị Na-ekwu Okwu n'Ọgụ '80s
Michelle Obama ọchị
Okwu na Okwukwe site n'aka ndi isi na ndi ozi di elu nke ndi LDS (Mormon)
Ndị isi nke Harlem Renaissance
Egwuregwu Gymnastics Egwu
Gịnị Na-eme Onye Nlekọta Ụlọ Akwụkwọ bụ Onye Ndú Nduzi Dị Irè?
Usoro nyocha akwụkwọ
Ndebanye aha Ndebanye aha LSAT
Akwụkwọ akụkọ akụkọ ihe mere eme nke US akụkọ site na State
Esi eme ka odo ma ọ bụ ọkụ ọkụ
Zute John Lee Ịhụnanya: Onye na-enyocha ihe nkwụnye mma mma